Tabobar fiidiyow ah: Saameyn yar oo Poly ah oo ku jirta Adobe Photoshop, fudud oo dhakhso badan | Abuurista khadka tooska ah
Casharrada fiidiyowga: Low Poly Effect ee Adobe Photoshop, fudud oo dhakhso leh
Saamaynta Poly yar Waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo halabuur mustaqbal iyo mid yar. Xaqiiqdii waad aragtay waqti waxaadna u kuur galaysay sida ay u egtahay dhamaadka joomatari ee dhinacyada dabeecada ama xaalad kasta. Saameyntani waa matalaadda ugu cad uguna saxsan ee Picasso ama Braque's cubism ee qarniga XNUMXaad adduunka dhijitaalka ah waxaana lagu dhaqmi karaa farsamooyin kala duwan iyo codsiyo kala duwan sida Adobe Photoshop ama Illustrator. Xaaladdan oo kale waxaan ku arki doonnaa barnaamijka Adobe Photoshop.
In kasta oo ay umuuqato inay tahay qaab isku dhafan, runtu waxay tahay inaysan jirin wax kakan oo ku saabsan, inkasta oo ay u baahan tahay u hurnaan iyo waqti. Tallaabooyinka aasaasiga ah ee aan raaci doono waxay noqon doonaan kuwa soo socda, fiiro gaar ah u yeelo!
Waxaan u sameyn doonnaa hage loogu talagalay wajiga kala jaban dabeecadeena nuskeed.
Waxaan siin doonnaa isbarbardhig iyo adkeyn dheeraad ah sawirkeena haddii loo baahdo.
Waxaan dooran doonnaa aaladda polygonal lasso waxaanna abuuri doonnaa xulasho qaab saddex-geesle ah ku leh wejiga wejiga.
Waxaan tagi doonnaa liiska Sifee> Dareemo> Iskucelcelis.
Waxaan ku celcelin doonaa labadii talaabo ee ugu dambeysay si isdaba joog ah inkasta oo aan ku sameyn doonno hababka gaagaaban.
Si loo isticmaalo celcelis ahaan waxaan riixeynaa a Ctrl / Ctmd + F iyo in laga doorto Ctrl / Cmd + D.
Markaan nus ka dhigno wajigeena waan xulan doonnaa oo waxaan ku soo koobi doonaa lakab cusub oo leh Ctrl / Cmd + J.
Waxaan riixeynaa a Ctrl / Cmd + T anaguna si siman ayaan u rogi doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharrada fiidiyowga: Low Poly Effect ee Adobe Photoshop, fudud oo dhakhso leh
10 waxyaabo badan oo xiiso leh oo loogu talagalay Adobe Illustrator
+ 20 Kheyraadka Guga Bilaashka ah ee Naqshadayaasha